मंसिर महिनामा चम्किने छ यी ६ राशिको भाग्य ! हेर्नुहोस् मासिक रा’शि’फ’ल – Krazy NepaL
मंसिर महिनामा चम्किने छ यी ६ राशिको भाग्य ! हेर्नुहोस् मासिक रा’शि’फ’ल
November 17, 2021 1265
व्यवहारमा संघर्ष गर्नुपरे पनि खोजमूलक अध्ययनमा लाग्नेहरूका लागि यो महिना लाभदायक रहनेछ। परिवारजनमा केही असमझदारी बढ्न सक्छ। तर, व्यवसाय र आयमूलक काममा फाइदा हुनेछ। खराब व्यक्तिको विश्वासमा पर्नाले काममा धोका हुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। अप्ठ्यारो पर्दा आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरू मौन रहने हुँदा बुद्धिविवेकले काम लिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि आहार–विहारमा सजग रहनुपर्ला। राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव कमजोर बने पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। आँटेको काम पूरा गर्न समय लागे पनि महिनाभरि आयआर्जन भइरहनेछ।
स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिए पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउने समय छ। आफ्नो प्रतिभाले अरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ। कृषि तथा व्यापारमा आम्दानी बढ्नुका साथै मनग्य धन सञ्चय गर्न सकिनेछ। केही खर्च लागे पनि महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन हुनेछ। स्वास्थ्यमा मौसमी समस्याले सताउन सक्छ। अरूको भरपर्दा काममा विलम्ब हुनेछ। तर सानो प्रयत्नले दिगो फाइदा उठाउन सफल भइनेछ। आँटले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक मार्गतर्फ अग्रसर हुनेछ। सामान्य चोटपटक सम्भावना देखिएकाले जोखिमपूर्ण कार्यमा सजग रहनुहोला।
काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। बोलीको प्रभावले यदाकदा वादविवादमा परिने सम्भावना देखिएकाले सजग रहनुहोला। टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्ने मौका छ। मिहिनेतले आर्थिक समस्या सुल्झाउनेछ। काममा सहयोगीले साथ दिनेछन्। विभिन्न अवसरले पछ्याउने ग्रहयोग छ। शत्रुबाधा, मुद्दामामिला वा कामका विविध झमेलाहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई दमन गर्न सकिनेछ। पारिवारिक समस्या समाधान हुनेछ। शैक्षिक उपलब्धिले मानसम्मान दिलाउनेछ। दाम्पत्य र प्रेममा भने केही असमझदारी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
स्वास्थ्यमा मौसमी समस्याले सताए पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। आँटेका काममा केही विलम्ब भए पनि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नेछ। सन्तानका माध्यमबाट लाभ हुनेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुन सक्छ। गुरुजनको प्रेरणाले मन दह्रो हुनुका साथै अध्ययनमा हौसला प्राप्त हुनेछ। नोकरी तथा पेसा–व्यवसायमा नियमित फाइदा हुनेछ। सोखले विलासितामा खर्च गराए पनि मिहिनेतले आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ। रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई भने सजिलै परास्त गर्न सकिनेछ। धनमाल हराउने, चोरिने वा ठगीमा परिने समेत ग्रहयोग छ। महत्त्वाकांक्षाले जोखिम निम्त्याउन सक्छ, सजग रहनुहोला।
अवसर र चुनौतीको संक्रमणले व्यवहार केही अस्थिरतातर्फ मोडिन सक्छ। साझेदारीमा विवाद र पारिवारिक मतभेद देखापर्ने हुँदा संयमतापूर्वक काम लिनुपर्नेछ। लेनदेनको व्यवहारले समस्या निम्त्याउनेछ भने निकटजनहरू बिनाकारण टाढिन सक्छन्। भूमिबाट प्रशस्त लाभ मिले पनि घर–जग्गा वा स्थायी सम्पत्तिमा वादविवाद आउन सक्छ। उच्च महत्त्वाकांक्षाले प्रश्रय पाउने हुँदा बुद्धि–विवेकले काम लिन नसकिएला। तापनि, साथीभाइ र बन्धुबान्धवको सहयोगले परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा व्यवसायमा फाइदै हुनेछ। लगनशीलताले अप्ठ्यारो ठानिएका काम पनि सम्पादन हुनेछन्। कृषितर्फ पछि फाइदा हुने काम थालनी हुनेछ।
विभिन्न अवसर जुट्नाले यो महिना निकै लाभदायक रहनेछ। नोकरी तथा राजनीति गर्नेहरूलाई विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले थप अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ। रोकिएका काम बन्नेछन् भने मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। उद्योग–धन्दा र व्यापार–व्यवसायमा सामान्य फाइदा भइरहनेछ। अग्रजहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। तर दीर्घकालीन योजना नहुँदा दिगो फाइदा उठाउन नसकिएला। परिवारजनमा असमझदारी समेत बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अंशीयारबीच सगोलको सम्पत्तिमा भागबन्डा लाग्न सक्छ।
सुरुमा केही खर्च लागे पनि यो महिना राम्रै उपलब्धिमूलक हुनेछ। इच्छाशक्ति एवं लगनशीलताले व्यावसायिक मार्ग अवलम्बन गर्नुका साथै धन आर्जनका विभिन्न स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। पढाइ, लेखन, संगीत र कलामा रुचि बढ्नुका साथै प्रतिभाको उचित कदर हुनेछ। व्यवसाय र उद्योगधन्दामा राम्रो फाइदा मिल्नेछ। बौद्धिक सफलताले उत्साह जगाउनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। प्रशस्त धन र बहुमूल्य धातुहरू संग्रह गर्ने मौका छ। स्वास्थ्यमा भने आँखा र पेटको समस्याले सताउन सक्छ। विशेष पदमा बसेका वा राजनीतिक पृष्ठमूमिका व्यक्तिबाट धोका पाइने योग रहेकाले सजग रहनुहोला। मिहिनेत गर्दा अभीष्ट पूरा हुनेछ।
मिहिनेतले काम बन्नेछन् तर बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पनि भोगविलासमा मन रमाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ। उत्तम वस्त्र, भोजन र विशेष उपहार हातलागी हुनेछन्। समाजमा गुमेको स्थान प्राप्त हुनेछ भने व्यवसायले प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ। तर, ज्वरो, टाउको दुखाइ वा आँखाको समस्याले सताउने हुँदा काम समयमा सम्पादन गर्न नसकिएला। आफन्तसँग असमझदारी बढ्ने हुँदा सजग रहनुहोला। बुद्धिको उपयोगले सफलताको सूत्र पत्ता लगाउन सकिनेछ। सोखले खर्च बढाउनेछ। लगनशीलताले मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ।
अर्थ अभावका बीच दीर्घकालीन महत्त्वका काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने समय छ। कर्जाको बोझ उठाउनुपर्ने हुन सक्छ। आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउनेछन्। काम बनाउन अलि दौडधुप गर्नुपर्ला। सुरुमा आशा देखाउनेहरूले अन्त्यमा बोली फेर्न सक्छन्। समय र नियमलाई पालना नगर्दा व्यवहारमा समस्या उत्पन्न हुनेछ। व्यावहारिक चुनौतीका साथसाथै यो महिनामा विभिन्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। केही खर्च लागे पनि प्रयत्न गर्दा देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तत्काल फाइदा नभए पनि पछिका लागि लगानी गर्ने मौका छ। नोकरीमा स्थानान्तरणको बलियो सम्भावना देखिन्छ। आफन्तबाट टाढिनुपर्ने स्थिति भने आउन सक्छ।
आम्दानी बढ्नुका साथै यो महिनामा खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र दैनिकीले उचाइको बाटो समाउनेछ। व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति हुनाले आयआर्जनका स्रोत थपिनेछन्। विद्यार्थीहरूमा तर्कशक्ति बढ्नेछ। राजनीतिक पहुँच बढ्नुका साथै नाम, दाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। नोकरीमा पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ। पारिवारिक र सामाजिक पक्ष भने केही कमजोर हुन सक्छ। असंयम व्यवहारले वादविवाद निम्त्याउनेछ। अध्ययनमा धेरै समय दिन नसकिएला। अल्पकालीन सोचाइले निर्णय कमजोर बनाउन सक्छ। केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ।
प्रतिभाको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले सामाजिक रूपमा ख्याति बढ्नेछ। अध्ययनले नयाँ गति लिनेछ भने प्रयत्न गर्दा देश–विदेश घुम्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ तर प्रेममा भने खटपटी आउन सक्छ। व्यापार–व्यवसायमा पनि लगानी बढाउने समय छ। कृषिउपज र पशुधनबाट मनग्गे फाइदा हुनेछ। आफ्नो वर्गको नेतृत्व गर्दै प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने अवसर जुट्नेछ। नोकरीमा पदोन्नति र राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ। राष्ट्रियस्तरको मानसम्मान प्राप्त हुन सक्छ। व्यवहारले उब्जाएको वादविवाद सम्झौतामा टुंगिनेछ। भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् र मनग्गे धनलाभ हुनेछ।
व्यवहारमा केही चुनौती देखिए पनि इच्छाशक्ति एवं लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। अधैर्य मनोवृत्तिले संघर्षको पथमा हिँडाउन सक्छ। फजुल खर्च बढ्नाले काममा समेत चुनौती देखा पर्नेछ। तापनि व्यवसायमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। आस मारेको प्रतिफलले समेत उत्साह जगाउनेछ। ऋणभार बढे पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने मौका पाइनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले जोस–जाँगर बढ्नेछ। केही समय अरूका काममा जुट्नुपरे पनि अन्ततः फाइदा आफैंलाई हुनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा केही व्यस्तता बढ्नेछ।
Prevआज मंसिर १ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
Nextयस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाईमा पनि छन् की ?